Cunnada Dhibcaha - Talaabooyinka Si Sax Ah Loogu Sameeyo | Cuntada Nutri
Maanta waxaa jira boqolaal cunto ah Ballanqaadkaasi qofka go’aansada inuu raaco, natiijooyin degdeg ah iyadoo sharciga ugu yar dadaal. Waxay caan ku yihiin in loo yaqaan cuntada mucjiso, Noocyada noocan ah waxay leeyihiin kuwa wax liidaya iyo kuwa difaacaya. Markan waxaan kuu sheegayaa a ee ugu caansan iyo magaca weyn ayaa leh: dhibcaha cuntada.
Hubaashii waad maqli doontaa iyada oo waxaad xiiseyneysaa inaad ogaato inay runti shaqeyneyso ama shaqeyneyso saameyn soo kabasho oo khatar ah sida cuntooyinka noocan ah badankood. Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa ay ka kooban tahay dhibcaha cuntada iyo haddii loo kala saari karo cunto mucjiso ah mise waa nooc qorshe miisaan lumis caafimaad leh taasi waxay kaa caawin doontaa inaad lumiso miisaanka oo aad baabiiso kiiladaas dheeriga ah.
1 Waa maxay cuntooyinka dhibcaha?
2 Faa'iido darrooyinka dhibcaha cuntada
3 Ma cunto mucjiso ah baa?
Waa maxay cuntooyinka dhibcaha?
Noocyada noocan ah ee cuntada ayaa ka shaqeeya hab ka duwan oo asal ah marka loo eego noocyada kale ee hababka khafiifinta. Cuntada su'aasha laga qabo qiimee cuntada waxay kuxirantahay borotiinka, dufanka ama karbohaydraytyada ay kujiraan. Wax kasta oo waad cuntaa oo cuntaa wuxuu leeyahay dhibco taxane ah, guud ahaan cuntooyinka leh kalooriyo badan waxay leeyihiin dhibco badan iyo kaloriin caafimaad qaba ama ugu yar waxay leeyihiin dhibco ka yar.
Qof kasta oo go'aansada inuu bilaabo nooca cuntada, ayaa leh nooc ka mid ah kuuboon maalinle ah leh dhibco kaladuwan oo kuxiran jinsiga, culeyska ama da'da qofkaas. Maalin kasta, qofku wuu cuni karaa ilaa uu gaaro taxane ah oo dhibco ah ugu badnaan, markaa waa inaad qortaa oo aad la socotaa qodobada la qaatay si aan looga gudbin xadkaas. Cunnooyinka dhibcaha ayaa kuu oggolaanaya inaad wax cuntid nooc kasta oo cunto ah mar haddii aanu qofku ka badnayn dhibcaha la cunay.
Sida laga soo xigtay kuwa u ololeeya cuntadan oo kale, haddii aad raacdo xeerarka iyo qawaaniinta la dejiyey miisaankaaga ayaa hoos u dhacaya dhib la’aan. Si kastaba ha noqotee, lama caddeeyo inaysan dhicin saameyn soo celin dhamaadka iyo in ay tahay 100% a cunto caafimaad iyo isku dheelitiran. Haddii qofka si guul leh u dhammaystiray cuntada la yidhi, ha badalin caadooyinkaaga oo raac nooc ka mid ah cunto caafimaad leh oo dheellitiran, Waxaa laga yaabaa inaad miisaanka mar kale kordho.
Faa'iido darrooyinka dhibcaha cuntada
Marka ay timaado ogaanshaha haddii cuntada caanka ah ee dhibcaha waxyeello uma leh caafimaadka, waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho astaamaha ay tahay inuu lahaado cunto caafimaad leh oo dheellitiran.
Waa inaad heshaa dheelitirnaan inta udhaxeysa kalooriyada laqushay iyo kuwa maalin walba laqiyaaso. Hadday ku baxaan Kalooriyada kayar kuwa la cuno, Cunnadu ma ahan mid la isku halleyn karo lagumana talin karo, waana sababta ay caafimaadka ugu tahay waxyeello.
Kordhi isticmaalka dufanka aan dheregsanayn oo yaree isticmaalka dufanka buuxa iyo dufanka trans.
Kordhinta cuntooyinka sida khudaarta, miraha, lowska, miraha isku dhan iyo digir.
Yaree isticmaalka sonkorta iyo cusbada cuntada oo dhan.
Haddii aad faahfaahin dheeraad ah ka bixiso dhibcaha cuntada, waad hubin kartaa inay jirto qaadashada kalooriga oo hooseeya maadaama haddii aysan arintu sidan ahayn, wax aan macquul aheyn in miisaan lumo. On lid ku ah, by jira xorriyadda guud ee wax la cuno, waxaa jiri kara suurtagalnimada in qof ha cunin wax miro ah ama khudrad ah markaad raaceyso noocan ah cuntada. Tan ka sokow, qofku wuu sii wadi karaa inuu cuno dufanka buuxa ama dufanka badan taas oo runtii u xun jirkaaga. Guntii iyo gunaanadkii cuntada mucjisada ah taasi waxay kaa caawin doontaa inaad miisaankaaga dhinto muddada gaaban laakiin tan mustaqbalka fog ayaa leh saameyn soo kabasho oo khatar ah taas oo kuu horseedi doonta inaad kasbato kiilo ka badan bilowga cuntada.
Ma cunto mucjiso ah baa?
Laga soo bilaabo salka in dhibcaha cuntada ballanqaadin miisaanka oo yaraada waqtiga diiwaanka sida haddii ay sameeyaan cuntooyin badan oo mucjiso ah. Nooca noocan ah wuxuu xaqiijinayaa inaad lumiso inta udhaxeysa nus kiilo iyo kiilo wiiggii, wax macquul ah oo taasi ku dhex socon karto caadiyan nooc kasta oo ka mid ah qorshe miisaan lumis caafimaad leh. Guusha cuntadani waxay ku jirtaa xaqiiqda inay iyagu liqeen kalooriya yar kuwa gubta. Sidaa darteed haddii aad sameyso xulasho wanaagsan oo ah cuntooyinka iyo nafaqooyinka waxaad u baahan tahay maalin-maalin-maalin, ma jirto sabab loo tixgeliyo dhibcaha cuntada sida cunto mucjiso ah.
Hadday dhammeyso ka dib ayuu yiri cuntada, weli waxaad la nooc ka mid ah cunto dheellitiran oo dheellitiran leh nafaqooyinka lagama maarmaanka ah adiguna waad dhameystireysaa jimicsi maalinle ah, wax dhibaato ah ma lahaan doontid si aad u ilaaliso culeyskaaga oo aanu ku qaban mid ka mid ah kiilo lumay dhibcaha cuntada. Qodob kale oo lagu daray nooca noocan ah, waa inaanay kugu khasbayn inaad wax iibsato nafaqada iyo nafaqada si loo magdhabo la'aanta nafaqooyinka, tan iyo cuntooyinka dhibcaha wax walba waad cuni kartaa midna ka saarin nafaqada lagama maarmaanka ah in jidhku u baahan yahay inuu si sax ah u shaqeeyo.
Soo koobid, dhibcaha cuntada waa hab miisaan lagu dhimo sida wax ku ool ah oo sax ah marka loo eego noocyada kale ee cuntada ee leh kala-duwanaanta weyn kooxee cuntada kooxo kala duwan iyadoo loo eegayo kalooriyadooda iyo muhiimadda nafaqadooda. Hadaad go aansato inaad sii wado noocan ah cuntada , waa muhiim inaad bedesho caadooyinkaaga cunista mustaqbalka tan iyo si kale haddii loo sheegay cuntada waxay noqotay mid aan waxtar lahayn. Xusuusnow in haddii aad raacdo nooc ka mid ah cunto caafimaad leh oo dheellitiran waxaad waayi doontaa kiiladaas dheeriga ah ee aadka kuu dhibaya waxaadna u sameyn doontaa qaab taas ah waxba yeeli maysid caafimaadkaaga iyo noolahaaga midna.
Markaasaan ku dhigay muuqaal sharraxaad leh ku saabsan cuntada dhibcaha iyo maxaa waxay kaa caawin doontaa inaad wax badan ogaato ee cuntada la yiri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Dhibcaha cuntada
Cunto kariska bocorka
Sidee loola Dagaalamaa Welwelka iyo Niyad jabka